Umzi-mveliso weeMveliso, ababoneleli |China Products Manufacturers
Imilinganiselo yeTire yedijithali
I-Analog Tire Gauges
I-Automatic Tire Inflators
Izihlalo zeTire Bead
Ii-Inflators zeTire / iiCompressors zoMoya ezincinci
Ukhuseleko lweSibini soMoya kwiHlabathi liphela, isi-7 ku-1
iPremium Digital Tire Inflator
I-Digital Inflator Gauge
I-Handheld Automatic Tire Inflator
I-Inflator yeTire yobuNgcali ngeGauge
I-Pistol Grip Tire Inflator ene-Gauge
IGauji ye-Inflator yeenyawo ezimbini
I-Inflator yeTire yoRhwebo ngeGauge
● Uyilo lwe-slimline kunye nobunzima obulula, kunika ubunzima obuncinci bomsebenzi kwaye kulula ekusebenzeni kwemihla ngemihla.
● Ulwakhiwo olunzima olunobumba oluqinileyo Umzimba we-aluminiyam wealloyi wandisa ubude benkonzo.
● I-hose ye-rubber ye-Hybrid ene-wiring yokukhusela ikhusela ukukrazula, ukusika kunye ne-kinking.
● Uyilo lwe-ergonomic lubonelela ngokukhululeka ngakumbi kunye nokuphelisa ukukhathala
● Iimpawu zokudibanisa ivalve yenqanaba eli-2: cinezela isiqhushumbisi ngokupheleleyo ukufutha, kunye nesiphatho sokukhulula siye kwindawo ephakathi ukopha umoya etayara.
● Ukuzilayita ngokuzenzekela xa kufunyaniswe umoya ophuma kwitayara, kwaye uzicime ngokuzenzekela emva kwemizuzwana engama-30 yokungasebenzi.
● Ixhaswe yi-2 x AAA iibhetri, amaxesha ama-4 ubomi bebhetri kunye nofakelo lwebhetri olulula.
● Umboniso wedijithali we-LCD one-backlight eqaqambileyo, i-angle yokujonga ebanzi ngaphandle kwendawo eyimfama.
● Ukuchaneka okuphezulu (ngaphantsi kwe-1%) kunye nesisombululo se-0.1psi sokusetyenziswa kunye ne-TPMS (iNkqubo yokuJonga iTyre Pressure Monitoring System)
• Igeyiji ye-inflation yedijithali inedizayini yemisebenzi emithathu: inflation, deflate kunye nomlinganiselo woxinzelelo
• Uluhlu lokulinganisa: 3 ~ 175psi kunye neziboniso kwi-KG, PSI okanye umlinganiselo weBar
• Igeyiji yeDigital inflator ixhotyiswe ngombhobho werabha oqinileyo wama-20“(500mm) kunye nomlindi omtsha ogobileyo.
• 3.5″ Igeyiji enkulu yobuso, iLCD, ukufunda kwedijithali
• Ivumela ufundo oluchanekileyo loxinzelelo lwetayara inceda ngokusebenza kosetyenziso ngeTPMS (iTire Pressure Monitoring System)
• Igeyiji ye-inflator yedijithali inokusebenza kwinkqubo yenitrogen
• Iyunithi egqunywe ngomkhono werabha ukwenzela intuthuzelo kunye nokuqina
• Vula/vala iqhosha lamandla elinokuvalwa ngokuzenzekelayo ukwenzela ubomi obuninzi bebhetri
• Ukutshintsha lula uyilo lwebhetri ye-AAA yokusetyenziswa ixesha elide kwe-4X
• Umsebenzi omtsha we-3X omude wokukhanya ngasemva
I-Inflator yeTire yobuNgcali
● II-Inflator yeTire yobuNgcaliilinganisiwe kwaye iqinisekisiwe ukuchaneka ngaphakathi kwe-1% kunye ne-0.1 psi isisombululo sokubonisa, ikhuseleke kakhulu kwaye ilungile kunenguqulo ye-analog!Xhasa iindidi ezine zemilinganiselo.Uluhlu: 0 ~ 175 PSI, 0 ~ 12 Bar, 0 ~ 1200 KPa, 0 ~ 12 Kgf / cm².
● I-air chuck evala ngokukhawuleza inika itywina elisemagqabini kwivalve yamatayara engaphandle kwevili lemoto kwaye ikhulula izandla zakho ukuba zisebenzise isivusi-moya samatayara.
● Umsebenzi we-3-in-1: jonga uxinzelelo lwetayara, faka amavili ngomoya kwaye udibanise amathayi.I-1/4 “i-NPT ekhawulezayo yokudibanisa isilinganisi sendoda esidityaniswe nesilinganisi samatayara inokunxibelelana neecompressors zomoya kuwo onke amatayara eenqwelo-mafutha.(Qinisekisa ukuba icompressor yakho yomoya inokusebenza nendoda eyi-1/4 “NPT ekhawulezayo yokudibanisa ifakela).
● Umboniso we-LCD okhanyayo wenza kube lula ukufunda.Umsebenzi onzima we-clip-on air chuck yenza kube lula ukutshixa kwi-stem valves.II-Inflator yeTire yobuNgcaliidityaniswe noluhlu lwayo olubanzi lokulinganisa ivumela ukuba ifakwe kuluhlu olubanzi lweesayizi kunye neentlobo zamatayara: ukusuka kwizithuthi zokwakha, iilori ezinkulu, iiSUV kunye neemoto ukuya kwizithuthuthu kunye neebhayisekile.
● EyethuI-Inflator yeTire yobuNgcaliyakhiwe ngomzimba odibeneyo oqiniweyo wokuqinisekisa ukusebenza kwexesha elide kunye ne-air chuck yangempela yobhedu yokumelana nokubola.
● Ubuncinci boMyalelo woMda: 1,000pcs
• Iinflator yetayara ephathwa ngesandlai-inflator/i-deflator ephathwayo ephathwayo.
• Inikwe amandla yibhetri yeLithium-Ion egcwalisekayo, ehlala ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-15 ezichukumisayo (ukusetyenziswa rhoqo), malunga nama-500 emijikelo yokunyuka kwamaxabiso.
• Qhagamshelana kwinkampani yenqwelomoya, seta uxinzelelo olufunekayo uze wenze okuinflator yetayara ephathwa ngesandlayenza okuseleyo (ukudibanisa i-hose akuyimfuneko).
• Ifakwe kwindawo eqinile ye-ABS, inombhobho oyi-1.5 m kwaye ivuthela ukuya kuthi ga kwi-174 psi ngokumangalisayo kwe-2500 L/min @ 174 psi.
• Iinflator yetayara ephathwa ngesandlakwakhona inamaqhosha amabini acwangcisiweyo kwangaphambili okuseta uxinzelelo oluqhelekileyo ngokukhawuleza nalula.
• Zicime ngokuzenzekelayo emva kwemizuzwana engama-90
• Ilungele iimoto, iilori, iitrektara, izithuthi zomkhosi kunye namatayara eenqwelomoya
• Umboniso omkhulu we-LCD ofundeka lula onesilumkiso esivakalayo
• Ityala le-ABS elinzima
• Ulungelelwaniso lomntu ngamnye kwaye wavavanywa, ukuhlangabezana nomgangatho we-EEC/86/217
• Umsebenzi we-OPS (Over Pressure Setting) ovumela itayara ukuba livuthelwe kuxinzelelo oluthile emva koko lizikhuphe ngokuzenzekelayo kuxinzelelo oluqhelekileyo lokusebenza, olusetyenziselwa ukuhlalisa amatayara kwiirimu.
● I-universal security air coupler ineempawu zokukhulula umoya ocinezelweyo phambi kokuba uqhawuke.
● Ivumela iingono ezininzi ukuba zihlangane nesinye.
● Umkhono wokhuseleko wokuthintela ukuqhawuka nokwenzakala ngempazamo.
● Isi-7 kuphawu olu-1 lwendalo iphela luphelisa ukungahambi kakuhle kokumatanisa utshintshiselwano ngokwamkela ezisixhenxe kwezona ziqhelekileyo iiplagi zomoya eziyi-1/4” zobukhulu bomzimba.
● Uyilo lombhobho wokhuseleko lopha ucinezelo lomgca osezantsi phambi kokuqhawula umdibaniso, ukuthintela ukubethwa kombhobho.
● Ihambelana ne-7 iintlobo eziphambili zeengono: I-Industrial (Milton), i-Automotive (Tru-Flate), i-ARO, i-Lincoln, ukuhamba okuphezulu (uhlobo lwesiJamani), uhlobo lwase-UK (Cejn 295, Rectus 19) kunye nohlobo lwesiTaliyane.
● I-coupler yendalo yonke yenziwe ngentsimbi kunye ne-alloy ye-aluminium.Intsimbi iqinile kwaye iyakwazi ukumelana nomonakalo ngaphezu kweentsimbi ezithambileyo kunye noluhlu olubanzi lobushushu obusebenzayo.I-aluminiyam ialloy inika ukuxhathisa okuphezulu kwe-corrosion.
● Ukufakwa kwicompressor zomoya, izixhobo zomoya kunye nemigca yomoya yokuwisa.
● I-1/4 ubungakanani bokuhamba okusisiseko
● Uhlobo lokudibanisa: Intambo yendoda ye-NPT, intambo ye-NPT yowesifazane, i-hose barb.
● Max.uxinzelelo lomoya: 120 PSI
● Max.ubushushu obusebenzayo: -20 ° ~ +100 ° C / -4 ° ~ +212 ° F
● Izinto Zokutywina: INitrile
● Ubuncinci boMyalelo woMyalelo: 2,000pcs / into
• Isixhobo sokufaka umoya kwitayara esichwepheshile esineempawu zegeyiji 3-in-1 umsebenzi: faka umoya, thoba kwaye ulinganise uxinzelelo lwetayara
• 80mm(3-1/8“) igeyiji yoxinzelelo (0-12 Bar/174psi)
• 500mm (20“) umbhobho werabha oqinileyo
• Isixhobo sokufaka umoya kwitayara esichwepheshile esinegeyiji eyakhiwe ngeyunithi ye-aluminiyam yokulahla ukufa egqunywe ngomkhono werabha ukwenzela intuthuzelo kunye nokuqina.
• Isixhobo sokufaka umoya kwitayara esichwepheshile esinegeyiji exhotyiswe ngephaneli yokudayela enkulu nefundeka lula.
• Ukwanda kokhuseleko kunye nokuncipha kweziganeko ezinxulumene namatayara
• Ukuchaneka: 0-58psi +/- 2psi, idlula i-EEC/86/217
• Ipistol grip grip tayara inflator enegeyiji inegeyiji ineziqhushumbisi zentsimbi ezinesigqubuthelo sePVC sokumelana nokutyibilika.
• 86mm(3-3/8“) igeyiji yoxinzelelo (0-7 Bar/100psi) enebhuthi yerabha enganyangekiyo ekhusela igeyiji kumhlwa, ukothuka kunye neempembelelo
• Ipistol grip grip tayara inflator enegeyiji yakhiwe ngokuqinisiwe okubunjiweyo kwendlu yeNayiloni.
• Ipistol grip grip tayara inflator enegeyiji exhotyiswe ngeegeji ezijikelezayo zayo nayiphi na ingelosi efundwayo, kwaye ingamcaba ukuze igcinwe.
I-Portable Air Compressor
● Uxinzelelo oluphezulu luyi-150 psi.I-aircompressor tire inflator ephathwayo inokukhupha ivili lemoto eliphakathi ukusuka kwi-0 ukuya kwi-35 psi kwimizuzu emi-5.
● I-inflator iya kuzivala ngokuzenzekelayo xa uxinzelelo lwetayara lufikelela kwixabiso lokuseta kwangaphambili, akukho mfuneko yakukhathazeka malunga nokunyuka kwamaxabiso okanye ngaphezulu kokunyuka kwamaxabiso.
● Icompressor tayara inflator ibonisa isibane esikhanyayo se-LED, esenza ukuba usebenze ebumnyameni.
● Umboniso wedijithali ubonelela ngokufunda ngokulula, Izikali ezine ezikhoyo: PSI, BAR, KPA, KG/CM.
● Isicinezeli somoya esiphathwayo esinemilomo emi-3 eyongezelelweyo enokuthi ihambelane nalo lonke itayara lemoto, ibhayisekile, isithuthuthu, i-ATV, iSUV, iibhola, umatrasi womoya, ichibi kunye nezinye izinto ezinokuphephetheka.
● Iimitha ezi-3 / iinyawo ezili-10 intambo yamandla eneplagi yecuba kunye ne-fuse yokugcina.
● Umbhobho womoya unokugcinwa kwi-compartment phantsi kompompo wamatayara, akukho mfuneko yakukhathazeka malunga neentambo ezingcolileyo.
● Ubungakanani obuqinileyo bulula kwikhareji kunye nokugcinwa.Izindlu ezihlala ixesha elide kunye nezidibeneyo zibonelela ngobomi obude.
● Ubuncinci be-oda: 1,000pcs
Umgangatho weTire Inflator
● Lo mgangatho we-inflator wetayara / min i-compressor yomoya inika uxinzelelo oluphezulu lwe-150psi okanye i-10 Bar kunye ne-airflow ye-35L / Min.Enkosi ngemoto eyomeleleyo, kuthatha imizuzu ukuvuthela itayara eligqabhukileyo ukuya kwi-35psi.
● I-12V esemgangathweni ye-inflator yetayara iya kuzicima ngokuzenzekelayo xa uxinzelelo lwetayara lufikelela kwixabiso elimiselweyo.Ikwaxhotyiswe nesikhuseli sobushushu.
● Ibhetri ye-lithium eyakhelweyo inamandla okunyusa amathayi e-4 emva kokutshaja ngokupheleleyo.
● Isikrini se-LCD sedijithali sibonisa uxinzelelo lwetayara kwi-PSI, iBar, i-KPA, kunye ne-kg.cm, kunye nesibane esingasemva siyenza ifundeke nakwimekobume emnyama.
● Iplagi yesigarethi yeDC 12V iyahambelana nazo zonke izithuthi kwaye iyahlangabezana neemfuno zakho zemihla ngemihla kunye nokusetyenziswa kwemoto.
● Isibane esiqaqambileyo se-LED sidityaniswe nemisebenzi emibini: i-LED emhlophe yokukhanyisa rhoqo, kunye ne-LED ebomvu yongxamiseko.
● Le inflator esemgangathweni yetayara ifanelekile kwimoto, i-SUV, ibhayisekile, ilori elula, amatayara esithuthuthu.Imilomo emithathu eyongezelelweyo ilungele iibhola zemidlalo, iphuli enokuvutheka, umatrasi womoya, iithoyi zamachibi kunye nezinye izinto ezinokuphephetheka.
• Igeyiji ye-inflator yeenyawo ezimbini ine-handheld lever throttle ebonelela ngolawulo oluchanekileyo lokunyuka nokunyuka kwamavili okanye ukugqabhuka.
• Ukufakwa kwevalve yeBrass kunye nepolishe yechrome efakwe intsimbi egqitywe ngumhlwa kunye nokumelana nomhlwa ukuhlala ixesha elide
• Igeyiji ye-inflator yeenyawo ezimbini yakhiwe ngomzimba onzima we-aluminiyam ukwenzela ubomi obude kunye nokuqina.
• I-dual head chuck yenza ivalve yetayara ifikeleleke ngakumbi.
• Zombini iikhatriji zevalve kunye negeyiji yegeyiji ye-inflator yeenyawo ezimbini zinokutshintshwa.
• Uxhotyiswe ngokupheleleyo nge-Zinc alloy die casting body w/ umgubo ocoliweyo omnyama oqatywe isiphelo
• Ityala elikhuselayo ngaphaya kwegeyiji yokudayela yokukhusela impembelelo, imelana negaraji yasekhaya enzima okanye ukusetyenziswa kweevenkile zorhwebo.
• I-Push-to-Inflate air filler trigger, kunye nevalve eyakhelwe ngaphakathi yomoya yokuvuza ukuze ihlise ngokukhawuleza amatayara avuthelwe phezulu.
• Igeyiji echanekileyo ephezulu exhotyiswe ngezindlu zentsimbi, ilinganiswe kwi-10 - 220 PSI.
• 1/4” NPT yokungena, umsonto weBSP uyafumaneka
• iinyawo ezi-5 ithumbu lerabha eguquguqukayo elinesidibanisi se-chuck yomoya ejikelezayo
I-Digital Air Pressure Gauge Gauge Inflator
● I-digital air pressure gauge gauge yi-3-230PSI digital inflator gauge echanekileyo ± 1PSI okanye i-1% yesikali esipheleleyo.Ixhasa iiyunithi ezi-4 (PSI / KPA / Bar / Kg.cm2) ezinokutshintshwa ngokucofa iqhosha leyunithi.
● Ixhotyiswe ngokupheleleyo nge-Zinc alloy die casting body w/ erhabaxa matte ngumgubo otyatyekweyo.
● Igeyiji yokulinganisa uxinzelelo lomoya yedijithali inecala elikhuselayo phezu kwegeyiji yokhuselo lwempembelelo, imelana negaraji yasekhaya enzima okanye ukusetyenziswa kweevenkile zorhwebo.
● Push-to-Inflate air filler trigger, kunye nevalve eyakhelwe ngaphakathi yomoya yokukhupha umoya ukuhlisela phantsi ngokukhawuleza amatayara avuthelwe ngaphezulu.
● I-digital air pressure gauge gauge inflator ingabonisa ixabiso lokuvavanya imizuzwana emi-2-3, ekulungele ukufundwa, akusayi kuphinda kuqikelelwe ngeegeji ze-analog.Inomsebenzi we-backlight kwaye inokufunda ngokucacileyo nangona kumnyama.Iza kuzicima ngokuzenzekelayo ukuba akukho msebenzi kwimizuzwana eyi-15 ukugcina amandla ebhetri.
● I-air inlet ene-1/4” NPT / BSP female thread yenza ukuba ihambelane noninzi lwecompressor yomoya.
● Ikliphu yobhedu kwichuck yetayara inokudityaniswa nayo nayiphi na ivalve yeSchrader.Imathiriyeli yobhedu ibonelela ngokumelana nomhlwa ngakumbi.
● 20inch / 40cm iinyawo bhetyebhetye irabha hose kunye isinxibelelanisi chuck emoyeni ejikelezayo.
123456Okulandelayo >>> Iphepha 1/6